तपाईँलाई राष्ट्रपति बनाउन गठबन्धनभित्र सहमति भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा झलनाथ खनालले दिए यस्तो जवाफ (भिडिओ सहित) – Sunaulo Nepal TV
तपाईँलाई राष्ट्रपति बनाउन गठबन्धनभित्र सहमति भएको हो ? भन्ने प्रश्नमा झलनाथ खनालले दिए यस्तो जवाफ (भिडिओ सहित)
काठमाडौं । नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाएर आफुहरुलाई केही फरक नपरेको जिकिर गरेका छन् । हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी निर्वाचनमा अहिले विद्यमान रहेको पाँच दलीय गठबन्धन कायम रहने विश्वास दिलाए ।
उनले भने,‘सकेसम्म हामी पाँच दलीय गठबन्धन कायम गरेर निर्वाचनमा जान्छौं ।’ उनले वर्तमान सरकारले राम्रो काम गरिरहेको पनि विश्वास दिलाए । नेपालले एमसीसी सम्झौता गर्दा अपरिपक्वता भएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘यो सम्झौतामा कतिपय यस्ता ब्लण्डर छन्, यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखियो भने देशमा आँच आउँछ । गलत प्रावधान हटाउनुपर्छ ।’ उनले एमसीसी संशोधन नगरी संसद्बाट पारित गर्न नहुने पनि तर्क गरे ।
पत्रकार धमलाले तपाईँ राष्ट्रपति बन्ने भनेर गठबन्धनको बीचमा सहमति भएको हो रु भनेर सोधेको प्रश्नमा नेता खनालले भने–‘मलाई थाहा छैन, त्यो चाहीँ परिस्थितिले के के सम्भावना बढाएर ल्याउँछ, त्यसलाई समात्ने कुरा हुनसक्ला । अहिले म त सामान्य रुपले उपचार गरेर आएको छु । राम्रो स्वास्थ्य बनेको छ । बन्दैछ । यो स्वास्थ्यलाई मैले एयरपोर्टमा आउँदा आउँदैपनि घोषणा गरेको छ कि मेरो यो नाफाको जिन्दगी हो । त्यसकारण म देश र जनताको लागि राम्रो काम गर्नेछु । जनता र मेरो पार्टीले जुन ढंगले मलाई उपयोग गर्छ, त्यो म गर्न तयार छु ।’
Previous अब यो बर्ष के खानु, सबै धान डुब्यो : यी ८ तस्विरले थामिदैनन् कसैका आँश
Next महाकालीको बाढीमा फसेका पाँचजना रुखमा चढेर गुहार माग्दै, अझै हेलिकप्टर जान सकेन